तपाइँको उद्देश्य के हो - जीवनमा तपाइँले यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने ।
७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १८:३१ March 22, 2020 ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १८:३१ March 22, 2020
हामी जीवनका धरै बिन्दुहरुमा प्रश्न सोध्ने गर्छौ – मेरो जीवनको उद्देश्य या लक्ष्त्य के होला ? हामी किन बाँचिरहेका छौ। मैले अब के गर्नु पर्ला अगाडी बढ्न आदित्यादि ।
यी प्रश्नहरु धेरै चाही हामी मध्ये धेरैले निराशाका दिनमा धेरै गर्ने गरेका छौ। असफलता, आभाब र निराशाका दिनहरुमा गर्ने यी प्रश्न यस्तो दिनमा जन्मिन्छ जुन दिन हामी हामीले हाम्रो उद्देश्य प्राप्त गर्दिनौ। लाग्छ त्यति बेला निराशा बाहेक केहि हुन्न।
आउनुहोस चर्चा गरौ:-
तपाइँले कसरी आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने ? Webster’s डिस्टनेरीले यसलाई यसरी परिभाषित गरेका छन् । “Something set up as an object or end to be.”
“End to Be” प्राय पूर्वानुमानित आवाज जस्तो लाग्छ- कि हाम्रो “उद्देश्य” हाम्रो नियन्त्रण बाहिर छ किन भने दिनको अन्त्यमा हामी साँच्चिकै हाम्रो सत्य गन्तव्यमा पुग्छौं, र जीवन के हो भनेर पत्ता लगाउने कोशिस गर्छु बाटोमा।
यदि हाम्रो जीवनको उद्देश्य र हामी यो धरती हुनुको रहस्य जब जब हामी बुझ्दै जान्छौ तब हाम्रा उद्देश्य, कार्य र योगदानको बारे हामीलाई ज्ञात हुन्छ।
जीवनमा तपाईको उद्देश्य के हो?
मैले एक जना साथीलाई सोधेको थिए “तिम्रो जीवनमा डर के हो ?” उ मानिसलाई चोट पुर्‍याउने कुरामा डराउनुहुन्छ र उनि सबैलाई समान ढङ्गको ब्यबाहार गर्नु हुन्छ सबै समान मित्रको रुपमा। सम्बन्ध जहाँ सुकै पुगोस् जसरि नि टुङ्गोस उसलाई न फरक पर्छ न उसको बिरोधि नै हुनेवाला छ।
हामी ७८ वर्ष सम्म बच्यौ भने ८०००० जना सग भेट भेट्छौं। हामी जन्मछौ हुर्कनछौ सुख दु:ख भोग्छौ र त जीवनमा धेरै कुरा सिक्छौ। जुन व्यक्ति सग हाम्रो गहिरो सहकार्य छ उसको मृत्युले हामीमा दु:खको अनुभूति हुन्छ।
हाम्रो जीवनको उद्देश्य अरूसँग सम्पर्क राख्नु हो र त्यसो गरेर हाम्रो जीवनको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ।
By: yourbijay my Views